श्रीकृष्णलाई भुलेर बिजयसंग श्वेताको प्रेम बिवाह ? - Filmy News Portal Of Nepal
अग्निलाई साक्षी राखेर ३३कोटि देवताको कसम खाएर एकअर्काको सुखदुःखमा साथ दिने भनेका थिएउ।तिमिले त त्यो कसम निभाएउ पनि मेरो सुखको घडी होस या दुखको घडी तिमी मेरो साथमा मेरो अन्तिम सास सम्म रहिरहेउ।मेरा यादमा जीवन जिउनु सजिलो पक्कै पनि भएन होला तिम्लाई मैले छाडे पनि जिवनमा आईपर्ने समस्याहरुले तिम्लाई छाडेनन होला । सुरुसुरुमा अब तिमिले अर्को विवाह नगर्ने अरे भनेको सुन्दा अलिअली खुसी तर धेरै पिडाको अनुभुती हुन्थ्यो । मृत्यु संगको लडाई मेरो एक्लो लडाई थिएन त्यहा हामी मिलेर लडेका थिएउ यदि म एक्लै लड्दो हु त कोहिनूर(श्रीकृष्णको अन्तिम चलचित्र) मा सायद हामी हुने थिएनौ!
म रहदा र म नरहे पछि पनि तिमिले म प्रती गरेको प्यार सद्भाव र श्रद्धा उच्च कोटिको छ । जब सधै साथ रहने कसमलाई मैले जिन्दगीको केही पाइलामा नै लत्याएर स्वर्ग आउन हुन्छ भने त्यही कसमको बन्धनमा तिमी सदाका लागि बाधिनु जाती हुदैन ।
मंसिर २२ गते तिम्रो विवाह भन्ने खबरबाट अनभिज्ञ म रहन सकिन । पक्कै पनि तिमिले धेरै सोचेर र बुझेर यो निर्णय लिएकी हौली । मसंग रहदा मैले तिमिलाई हासो कम आँसु ज्यादा दिएको थिए भलै त्यि आसुमा असिम प्रेम बगेको थियो। तिमि प्रती मेरो कुनै गुनासो छैन तिम्रो माया र साथको म ऋणी रहि नै रहनेछु।
एक्लै जीवन बिताउने कुरा सामान्य होइन मैले छाडे पछि तिमिले अर्को बिहे नगर्ने भन्ने निर्णय तोड्नु पर्ने थियो तोडेउ । काल्पनिक जीवन वास्तविकता भन्दा धेरै फरक हुन्छ। म पश्चात् अरु कसैसंग सम्बन्धमा नजोडिनु मात्र मप्रतिको प्रेम र सम्मान होइन मेरो ठाउमा अरु कसैलाई देख्नु पनि मप्रतिको प्रेम हो सम्मान हो । एक्लो जीवन विगत केही बर्षदेखी बिताउदै गर्दा तिमिलाई धेरै गाह्रोसाह्रो पर्यो होला मेरा यादहरुले सताए होलान सपनिमा म आएर निद बिथोलिदिए हुला , तिम्रो दिमागमा एकछत्र राज गरेर तिमिलाई एकोहोरो बनाइदिए हुला, परेली सधै ओसिला हुनुमा म नै प्रमुख कारक भए हुला स्वयता यी बाहेक तिमीलाई धेरै चोट म तिम्रो साथमा अनुपस्थित भएर नै दिएको छु जस्को लागि म माफिको लायक छैन ।
वैवाहिक जिवनको तिमिलाई असिमित शुभकामना भावी दिनहरुमा तिमिलाई मेरो कमिको महसुस नहोस फेरि मेरै कारण परेली नओसिउन, हर्ष र उल्लासमा बाकी जिवन बितोस। भौतिक रुपमा तिम्रो विवाहमा सरिक हुन नपाए पनि मेरो आशिर्वाद र माया सदा तिमी प्रती रहने नै छ!
सोनिका र पारसको च्याट बाहिरिएपछी (हेर्नुस् के-के भयो कुरा)